Baarlamaanka federaalka oo maanta kulmay, isna dhax-xulay guddiga doorashada m/weynaha. – Radio Daljir
Seteembar 1, 2012 12:42 b 0
Muqdisho, Aug 30 – Mudanayaasha baarlamaanka cusub ee dawladda federaalka ayaa maanta markoodii ugu horraysay yeeshay kulan iskugu yimaadeen tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay doorteen afhayeenkooda iyo labadiisa ku-xigeen.
Kulanka xildhibaannada oo uu shir guddoominayey afhayeenka cusub Prof. Maxamed Cismaan Jawaari, ayna dhinaca fadhiyeen labadiisa ku-xigeen, ayaa ku salaysnaa sidii loo meelayn lahaa dhawr arrimood oo ay ka mid tahay doorashada m/weynaha, dhaarinta xildhibaanno cusub iyo ka baaraan-degga xubno lagu muransan yahay ku biiriddooda baarlamaan, sidaasna waxaa golaha ka hor sheegay Prof. Jawaari oo ajandaha akhriyey.
Guddoomiyaha, ayaa wakiillada u soo jeediyey in ay ka go’aan gaaraan qodobada ajanduhu ku saabsan, waxaana xildhibaannadu ay iska dhax-xuleen 15 xubnood oo ah guddiga doorashada madaxweynaha, iyadoo isla maantaba xubnahaasi cod gacan-taag ah lagu aqbalay.
Mudanayaasha cusub, ayaa sidoo kale rog-rogay qaddiyadda ku saabsan xubno lagu muransan yahay ka mid noqoshadooda baarlamaanka, kuwaasi oo ah rag u badan siyaasiyiin hore oo guddiga farsamada ee xulidda baarlamaanku u diideen xildhibaannimada, iyagoo u daliilsaday in ay yihiin dagaal oogayaal ku lug-ku-lahaa daadashada dhiiggii sokeeye.
Xildhibaannada, ayaa arrintaasi dib-u-dhigay illaa iyo inta m/weynaha laga dooranayo, iyadoo kaddibna ay xaajadaasi gali doonaan guddi baarlamaanka laga qabtay, kuwaasi oo jaan-gooyn doona in xubnahaasi loo ogalaado galidda baarlamaanka iyo in kale.
Xubnahaasi lagu muransan yahay, maanta waxay ku sugnaayeen madashad uu ka socday fadhiga baarlamaanku, iyagoo haystay ogalaansho maxkamadda sare, hase yeeshee waxaa la tilmaamayaa illaa iyo inta murankooda xal laga gaarayo in aysan yeelan doonin wax cod ah, taasoo ah isla go’aan baarlamaanku gaaray maanta.
Sikastaba ha ahaatee guddiga doorasho ee maanta la qabtay, ayaa lagu wadaa in ay saacadaha soo socda ku dhawaaqaan xilliga rasmiga ah ee ay dhici doonto doorashada m/weynaha Soomaaliya.